न्यूसाउथवेल्स राज्यले जुलाईदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउदै, ‘पाइलट कार्यक्रम’ सार्वजनिक - Nagarik Today
होम » न्यूसाउथवेल्स राज्यले जुलाईदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउदै, ‘पाइलट कार्यक्रम’ सार्वजनिक
by नागरिक टुडे जेष्ठ ३१, २०७८
न्यूसाउथवेल्स राज्य सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी-हरुलाई अष्ट्रेलिया भित्र्याउने योजना आगामी जुलाई महिना-देखि कार्यान्वयन गर्ने पाईलट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आज न्यूसाउथवेल्सका ट्रेजरर डोमिनिक पेरोटीले सार्वजनिक गरेको योजनामा हरेक दुई सातामा २ सय ५० जना विद्यार्थीहरुलाई क्वारेन्टीनमा राख्नेगरी ल्याउने तयारी रहेको जनाइएको छ ।
उनले यो संख्या यस वर्षको अन्त्यसम्ममा दोब्बर पारिने योजना पनि सार्वजनिक गरे । यस अन्तर्गत कार्यक्रम सुरु भएपछि महिनामा कम्तिमा ५ सय विद्यार्थी आउनेछन् ।
आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नसकेको भनी अष्ट्रेलियन सरकारको आलोचना भइरहेको बेला सत्तारुढ पार्टीकै नेतृत्व रहेको न्यूसाउथवेल्स सरकारले यो योजनाबाट सातामा तीन हजार अष्ट्रेलियन नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने योजनामा कुनै असर नपर्ने जनाएको छ ।
महामारी अघि करिब २ लाख ५० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी न्यूसाउथवेल्समा पढिरहेका थिए । ट्रेजरर पेरोटीले हाल ५० जार विद्यार्थीहरु न्यूसाउथवेल्स आउन तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
विद्यार्थी ल्याउने निर्णयबाट एक लाख मानिसहरुलाई रोजगार प्राप्त हुने पनि उनले अनुमान गरे । यसले न्यूसाउथवेल्सको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर गर्ने उनको अपेक्षा छ ।
यसरी आउने विद्यार्थीहरुका लागि छुट्टै क्वारेन्टीनको व्यवस्था गरिनेछ । यो क्वारेन्टीन कहाँ हुनेछ भन्ने विषयमा उनले केही खुलाएका छैनन् । यो पाईलट परियोजनालाई न्यूसाउथवेल्स स्वास्थ्य विभाग र प्रहरीले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
संघीय सरकारबाट पनि अनुमोदन हुने र लागू हुने कुरामा उनले आशा व्यक्त गरेका छन् । यसरी विशेष क्वारेन्टीन मार्फत पढ्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको क्वारेन्टीन लगायतको खर्च भने विश्वविद्यालय, कलेज वा विद्यार्थीहरुले नै तिर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत ढिलोमा आगामी ६ साताभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आउने क्रम सुरु हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! PR को लोभमा अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरु फस्दै, दुई वर्षको पढाई एकैवर्षमा !
अष्ट्रेलिया । यतिबेला अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको आगमन शून्य छ । यहाँ भएका विद्यार्थीहरुकै भरमा चलिरहेका छन् कलेज र युनिभर्सिटीहरु । अष्ट्रेलियामा व्याचलर डिग्री वा त्यसभन्दा माथिको पढाईपछि दुई वर्षको पोष्ट स्टडी भिसा प्राप्त हुन्छ ।
यो भिसामा रहेको बेला पढ्न पनि पाईन्छ, फुल टाईम काम गर्न पनि पाईन्छ । पीआर हुन नसक्ने कोर्षमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी यही बेलामा दुई वर्षको कोर्ष एकै वर्षमा पढाई सकाइदिने र त्यसबाट पीआर पनि दिलाइदिने प्रलोभन दिँदै केही कलेजहरुले एजेन्टमार्फत धमाधम गलत कार्य गरिरहेको गुनासो विद्यार्थीहरुले गरेका छन् ।
यो गैरकानूनी कार्य नै हो । अहिले थाहा हुन्न भने पनि भोलि खुल्दैजाँदा यसमा छानविन पक्कै हुन्छ र धेरै मानिसहरुको भविष्य अन्धकार बन्नसक्छ ।
मेलबर्नमा यतिबेला कुकरी पढिरहेका सुमन ढुंगाना (नाम परिवर्तित) भन्छन् मैले अप्रिलमा पढाई ज्वाईन गरें । तर, मलाई त फेब्रुअरीदेखि नै भर्ना भएको भनेर कोर्ष दौडाईयो ।
एक वर्षमै कुकरी सकाइदिने र त्यसपछि सिधै पीआरको लागि आवेदन दिन सकिने भनेर एजेन्टले बताएको छ । खै होला त नि भनेर म पनि भर्ना भएँ । भोलि के हुन्छ थाहा छैन ।
अहिले अष्ट्रेलियामा विभिन्न कलेजहरुले कुकरी लगायत पीआर पाउन सक्ने विषय धमाधम थपिरहेका छन् । उनीहरुको एउटै ध्याउन्न कसरी सर्टिफिकेट बाँड्ने र पीआर दिलाउने भन्ने मात्रै देखिन्छ ।
कलेजहरुले विद्यार्थी भर्नाको रेकर्ड आफैंसँग राख्न पाउने र वर्षमा एक पटक अथवा अडिटको समयमा मात्र सरकारी निकायमा अपडेट गर्नुपर्ने नियमको फाईदा उठाउँदै यस्तो गतिविधि भइरहेका छन् ।
एक कलेज सञ्चालक भन्छन् “आज त केही नहोला । सरकारी लुपहोललाई मिसयुज गरेर काम होला । तर, भोलि सरकारी निकायले चाल पाएमा यी अहिले पढेका व्यक्तिहरु सबैको सर्टिफिकेट रद्द भयो भने के हुन्छ ?
त्यतिबेला अहिले गरेको यो गैरकानूनी कार्यले कति जनाको भविष्य अन्धकार बन्ला ? म यहीँ सोचेर हैरान छु । यतिमात्र होइन, एक वर्ष लामो कोर्षलाई तीन महिनामा सकाएर विद्यार्थीले कसरी ज्ञान हासिल गर्छ ?
काम गर्न जाँदा उसको क्षमता खुल्दैन र ? नियम मानेर अघि बढ्दा नै भोलि अप्रत्याशित घटनामा पर्ने जोखिम कम हुन्छ ।”
यी कलेज सञ्चालकलाई पनि केही एजेन्टहरुले यो विधिबाट विद्यार्थी भर्ना गरेर मालामाल बन्न सुझाव दिएको उनले बताए । “तर मैले मानिनँ । किनकि, यो गैरकानूनी कार्य नै हो ।
अहिले थाहा हुन्न भने पनि भोलि खुल्दैजाँदा यसमा छानविन पक्कै हुन्छ र धेरै मानिसहरुको भविष्य अन्धकार बन्नसक्छ । एआईविटी र अन्य नर्सिंग कलेजहरुले कानूनका छिद्र खोजेर भर्ना लिँदा नेपाली विद्यार्थीहरुको बेहाल भएको घटना पुरानो हैन ।” उनले भने ।
अन्य दक्षिण एशियाली समूदायमा मूलत: भारतीय उपमहादीपका विद्यार्थीमा यसरी सर्टिफिकेट बनाउने र त्यसैका आधारमा विभिन्न काम गर्ने, अध्यागमनमा पेश गर्ने लगायतका कार्य फैलिएको भएपनि पछिल्लो समय कोभिड १९ कोरोनाको महामारीपछि नेपाली समूदायका विद्यार्थीहरुमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाई छ ।
अष्ट्रेलियामा बेला बखत रोयल कमिशन गठन गरी विभिन्न क्षेत्रका विकृति विसंगति र समस्याहरुलाई छानविन गर्ने, तिनलाई निराकरण गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको यो विकृति पनि पक्कै लुक्ने छैन ।
तर, जतिबेला यो खुल्नेछ नेपाली विद्यार्थी पनि यस्तो गलत कार्यमा सहभागी थिए भन्ने उदाहरणले हाम्रो इज्जत कहाँ पुग्ला ? सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेपाली विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलवाड गर्ने यो कार्य गर्ने कलेज सञ्चालकहरुले त्यतिबेला जिम्मा लिन सक्छन् त ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
international students in australiansw